Warkii Mayan |
Iska diyaar u ah in loo qaado jeer Mayan qadiimiga ah la this Free dhigeeysa naadi Ka dhig Waxaad Guuleysan, Mayan Legend. Tani waxay leedahay sawiro cajiib ah iyo dalabyo 3 siyaabo inuu ku guuleysto. The Free dhigeeysa naadi Hayso Waxaad Win waa dhan oo ku saabsan ururinta waji oo ku guuleystay lacag caddaan weyn. In this, aad leedahay si aad rogo ah laadhuu oo waxba laakiin nasiib saafi ah. The horumarinta ciyaaraha IWG waa kuwa ka dambeeya naqshadaynta iyo dhismaha ee ciyaarta this la yaab leh. Sida ay sumcad, ay sameeyeen shaqo cajiib ah in la abuuro this Free dhigeeysa naadi Hayso Waxaad Win.
Ma jiraan wax sida ciyaar fiican in aad qaada dunida soo socda waa. Sidaas, u diyaar iyo bilaabaan ciyaaro this ciyaarta guul degdeg ah iyo naftaada bac qaar ka mid ah abaal-marinno weyn.
Baadh A New World Iyadoo warkii Mayan The
doorashada A mid ah midabo qurux badan ayaa loo isticmaalaa in la abuuro oo dhan waji halkan. waji ayaa waxaa loogu talagalay si loo waafajiyo theme of Afyare dhammaataan. waji ayaa waxaa lagu kala karo by midabada ay: buluug, cagaaran, iyo guduud, iyo huruud ah. Waxaa lagu wadaa loogana hortegi kaynta ku yaal oo la Samada a miro casuusta iyo geedaha ee asalka ah. Afyare laftiisa in derbi tahay. On hal dhinac oo shaashadda aad arki karto laba dices, mid madow iyo mid cad iyo dhinaca kale ee shaashadda waa miiska xajiya buuxinta la midabka ah ee waji sida ay u sii is baabbi'iyey. RTP ayaa sidoo kale waa mid aad u sarreeya, gaarey heer ah 85.16%.
Tani Free dhigeeysa naadi Hayso Waxaad Win ayaa saakay ah mid aad u fudud. All aad u baahan tahay inaad samayso waa rogo ah laadhuu iyo waji ka miiska dhawri doonaa is baabbi'iyey. At-upka ah, Waxaa lagu weydiin doonaa inaad dhigay saamiga aad bet gujinaya ah + iyo – fursadaha. Markaas waxaad riix doonaa ikhtiyaarka Play iyo ciyaarta ku bilaaban doono. Labada dices tusi doonaa wadataa ka soo 1-6 dhammaadka kasta. The-gashiga ku jira wadataa kuwa is Halaagnay iyo wax kasta oo Waji kale ku xiga in ay la mid tahay mid ka baabbi'iyeen waxaa sidoo kale burburiyeen. The saf oo midabo kala hayn doonaa buuxinta leh tirada sii kordhaysa ee waji. Marka aad buuxiso mid ka mid ah oo isku xigta si buuxda u, aad waxaa lagu Abaal marin ah ee aad kaga badisay.
Tani Free dhigeeysa naadi Hayso Waxaad Win waxay leeyihiin wax kasta oo loo baahan yahay oo loogu talagalay dadka si ay u jeclaan kulan sidan oo kale. ka iman kara guusha weyn, crystal naqshadeynta cad, saamaynta dhawaaqa cajiib ah oo gameplay xiiso leh waa waxa ay ka dhigeysaa halyeeyada Mayan mid ka mid ah ugu playable id ah u khamaara ah.